China A4 Sheet Label orinasa sy mpanamboatra | Fangda
* Ny taratasy FANGDA A4 dia vita amin'ny taratasy, tsy misy poizina, mahatsapa milamina amin'ny tanana sy tsara bika.
* Fanontana mazava
* Ny taratasy dia mety ho amin'ny loko isan-karazany toy ny fotsy, volomparasy, mavo, mavokely sns.
* Mety amin'ny mpanonta printy inkjet sy laser izy io.
* Ny mari-pamantaranay mahazatra dia tonga amin'ny endrika efa-joro amin'ny ravin-taratasy A4, fa izahay kosa dia manome marika boribory sy endrika hafa isan-karazany mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana.
* Ny adhesives mora tohina amin'ny tsindry (antsoina koa hoe PSA na stick-self) dia asiana tsindry maivana tsy misy activation na hafanana. Matetika ny labels PSA dia misy liner famoahana izay miaro ny fametahana sy manampy amin'ny fikirakirana ny marika.
Tombontsoa amin'ny marika A4:
* Famantarana ny vokatra, toy ny tabin'ny index index. Ny fampahalalana sasany amin'ny marika dia mety misy anarana, atiny ary daty natomboka.
* Logistika sy fandefasana entana, ohatra dia ny adiresy marika, marika boaty ary marika pallet.
* Fampidirana mitsangana: fametahana adiresy mafana sy fandrakofana, fanontana, fanapahana faty… vita ao amin'ny atrikasa misy antsika manokana ny fizotrany rehetra.
Previous: Valopy feno fonosana PE
Manaraka: Poly Bubble Mailer